. 2 volana aza moa tena tsy nisokatra mihitsy ny toeram-pivarotana, hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Tamin’ny fotoana niverenan’ny fisokafana indray dia misy fotoana kapa 1 no lafo ao anatin’ny herinandro. Tamin’ireny fotoana mbola tsy nidiran’ny Coronavirus ireny aza moa, hoy izy, nisy fotoana entana 1 monja isan’andro no lafo. Maro karazana ireo vokatra amidy, toy ny poketra, poketram-behivavy, malety, poketram-bola, fehikibo, kiraro, satroka. Hoditr’omby, hoditr’ondry, hodi-bibilava kosa no akora fampiasa. Raha misy mpanjifa miisa 10, hoy hatrany izy, dia 6 amin’ireo ihany no Malagasy ary saika Malagasy mila ravinahitra any an-dafy. Antony maha lafo ireo entana amidy ihany koa, raha ny fanazavan’ireto mpisehatra amin’ny asa tanana ireto, dia ny tsy fisian’ny akora hiasana satria tsy misy ny vola hanjifana izany. Izahay no manamboatra sy mikarakara ary maka ireo akora hanaovana ny entana amidinay any Sina, hoy izy. Manodidina ny 130.000 ariary ka hatramin’ny 800.000 ariary moa no vidin’ireo entana ao amin’ity magazay iray ity, raha ny fanampim-panazavany hatrany.